Ityala Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Unamandla okwenza utshintsho kwaye uzive uphelele.
Intsingiselo yekhadi le-tarot "Umgwebo" okanye "Isigwebo"
La Ileta yomgwebo, ngamanye amaxesha kuthiwa «Resurrección«Imele indibano enkulu ukuba abantu bakudala bakholelwa ukuba iza kwenzeka kube kanye kwiminyaka yonke. Eli yayilixesha lokuba imiphefumlo ivunwe kwaye ibuyiselwe ekhaya kwindawo evela kuyo, ngaphandle kwenkqubo yelanga. Emva koko el mundo Kuhlwayelwe ngebhetshi yemiphefumlo emitsha kwaye inkqubo iqala ngokutsha.
Ukusuka kwimbono yanamhlanje, le ndibano inkulu- ebandakanya bonke ubuntu owakhe waba nayo yonke imiphefumlo othe wenza naye umsebenzi onzulu - uhlangana naye ugqibezele inkqubo. Ngandlela thile, ngokomfuziselo sikubhiyozela oku kubuyela embindini unyaka nonyaka ngomhla wokuzalwa kwethu.
Ngokwamazwi obuqu, i Ikhadi leTarot loMgwebo libonisa inkululeko kwiingxabano zangaphakathi, kwaye icace gca ijelo, ukungcwatywa kweetalente kunye nezipho ezivela kwixesha elidlulileyo lokuzalwa zinokuza ngomntu kobu bomi. Eli khadi likucebisa yithemba inkqubo yokuvula, kuba oko kuvela kumgangatho ophezulu ngokuqhubekayo. Ungazibonakalisa ngokungazenzisiyo njengezinto ezininzi, kwaye uncede ekuvuseleleni impendulo kwabanye.
Vumela ukuhamba kwexesha lakho elidlulileyo. Ixesha elizayo liyakwamkela ngobuninzi bokukhula kunye notshintsho.
La I-Deck yoMgwebo icebisa ukuba uzivumele ukhule, Guqula kwaye ukhulule amandla afihliweyo ngaphakathi kwakho. Lahla iinzame ezingaphumelelanga ngaphandle kokutyeshela imisebenzi yakho. Kwangelo xesha, tyala amandla akho ekukhuleni okutsha.
Akukho sidingo sokwala abanyeendaweni yoko balawulwe ngabo bakhwaza ngendlela elizothe. Le nkqubo ayikho malunga nabo. Imalunga nawe kunye nomnqweno wakho wokutshintsha ubomi bakho kwaye ube ngumntu ogqibeleleyo. Zithembe iimpembelelo zakho kwaye uvumele oku kuvuswa okumangalisayo ukuba kwenzeke.